စက်မှုဆိုင်ရာ Digitalisation - WorldRef
ထိရောက်သော Digitalisation Solutions သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်
သင်၏စီးပွားရေးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာများနှင့်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဦး ဆောင်သော AI ၀ န်ဆောင်မှုခေါင်းဆောင်များနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလူ့ဗဟိုပြုဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအရွယ်အစားကြီးမား။ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်း ၂၅ ခုကျော်မှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားသည်။
အိတ်ဆောင် Friendly ဖြေရှင်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အတည်ပြုပြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှစီးပွားရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်များကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။
$ 12.44 ဘီလီယံ
ဒေါ်လာ ၁.၆၇ ဘီလီယံ (၂၀၁၇) မှ ၄၀% CAGR ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ရန် IIoT ပလက်ဖောင်းများအတွက်ခန့်မှန်းထားသောအသုံးစရိတ်ဖြစ်သည်။
(လူးဝစ်ကိုလံဘတ်စ, Forbes မဂ္ဂဇင်း, 2019)
စိတ်ကြိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ် Digitalisation ဖြေရှင်းချက်
စမတ်ကို Maintenance Solutions
Project Management Software များ
Edge အင်ဂျင်နီယာ Software များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်တောက်
အင်ဂျင်နီယာ Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ထိရောက်သောစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးပါ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင်နှင့် Digital Manufacturing Solutions ဖြင့်ယူနစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါ။
အမှုအရာများ၏အင်တာနက်အင်တာနက် (IIOT) ၏အားသာချက်အားဖြင့်အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုရှိသည်။
ဘုံစက်မှု protocol (CIP)
ဝေးလံခေါင်ဖျားစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး & စစ်ဆင်ရေး
အခြေအနေစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး & ခြေရာခံ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် Maintenance လိုအပ်ချက်များကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
Smart Maintenance solution သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုသိသိသာသာကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီး၊
အဆင့်မြင့်အရောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် digitalisation Solutions ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်။
အရောင်း & အမိန့်ခြေရာခံခြင်း
အရောင်း Analytics မှ & ခန့်မှန်းချက်
Customer Relationship Management Software ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်သင်၏အဖွဲ့အစည်း၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုစီမံပါ။
Omnichannel Analytics မှ
Real-Time Embedded Analytics မှ
လုပ်ငန်း Mobility ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု SOFTWARE Tools များ
Task & ဇယားစီမံခန့်ခွဲမှု
ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုအားဒစ်ဂျစ်တယ်ပြုခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခန့်မှန်းရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းကိုပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် Inventory စီမံခန့်ခွဲမှု
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0, IIOT & AI အ တော်လှန်ရေး
စက်မှု artificial Intelligence (AI)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Artificial Intelligence (AI) ဖြစ်လာစေသည်
အခွင့်အလမ်းနေရာများကိုဖော်ထုတ်ပါ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပြီး Artificial Intelligence (AI) ၏အကူအညီဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ။
လုံခြုံပြီးဒဏ်ခံနိုင်သော Cyber-Security Solutions ဖြင့်သင်၏အထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကိုပြင်ပမှဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ခိုးခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းများမှကာကွယ်ပါ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော Cloud Solutions နှင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်အဖွဲ့အစည်းအားဖွင့်ခြင်း
အရွယ်အစားကြီးမားသည့် cloud computing ဖြေရှင်းမှုများဖြင့်သင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ရန်နှင့်စစ်ဆင်ရေးများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရန်ကူညီခြင်း။
BIG & SMALL အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
Big Data Analytics နှင့် Big Data Analytics နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ၏အတိုင်းအတာကို Big Data နှင့် Business Intelligence အစိတ်အပိုင်းများမှန်ကန်စွာပေါင်းစပ်ပြီးဆန်းစစ်ပါ။
ညှိနှိုင်း, အမိန့် & အနီးကပ်သဘောတူညီချက်ထားပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ WorldRef ကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးလို့ပါ
WorldRef ရောင်း ၀ ယ်သူ၊ PT Menamas၊ အင်ဒိုနီးရှား
WorldRef ရောင်းသူ၊ အလွတ်တန်း၊ အိန္ဒိယ
WorldRef အဖွဲ့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောတွဲဖက်ကွန်ယက်တစ်ခုရရှိထားသည်။ ငါထိုကဲ့သို့သောတက်ကြွသောအသင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ အရောင်းလူတစ် ဦး အနေဖြင့် WorldRef သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, PT Sanki Cranes, Indonesia
အခြားစက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများ သငျသညျထိရောက်စွာ Operate ကူညီရန်
ကြိုတင်စီစဉ်ထားမရှိသောပြတ်တောက်မှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာနည်းပညာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကို ၂၀% လျှော့ချနိုင်သည်
(ဆောက်လုပ်ရေး ၂၀၂၀ တွင်နောက်ထပ်ပုံမှန်ဖြစ်သည့် McKinsey & Company)
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိအပြိုင်အဆိုင်များပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောကုမ္ပဏီများမှရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှသင့်ကိုလွယ်ကူစွာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။ ကျေးဇူးပြု သင့်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ.
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအာရှရှိနိုင်ငံ ၂၀ တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ ပိုပြီးအဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆော့ဝဲလ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။ အာရှတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေရန် WorldRef ကမည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
အာရှတစ်လွှားရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ၂၀ ကျော်မှမြန်ဆန်။ ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးကိုရယူပါ။ စစ်ဆေးပါ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်အခြား ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ရောင်းသူအတွက်
သငျသညျစက်မှု Digitalisation န်ဆောင်မှုများပေးသလား?
စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0 သို့တိုးတက်ရန်စိတ်ဝင်စား?